बस दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्युपछि शोकमा पाल्पाको तानसेन बजार बन्द (६ तस्वीर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बस दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्युपछि शोकमा पाल्पाको तानसेन बजार बन्द (६ तस्वीर)
पाल्पा। रम्भा गाउँपालिका ४ हुमिनमा शुक्रबार लु २ ख ९७५ नम्बरको बस दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु भएपछि शोकमग्न रहेको तानसेन बजार आज बन्द रहेको छ। बस दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आज पाल्पाका बजार बन्द गरिएको हो।
पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको आग्रहमा पाल्पाका उद्योगधन्दा, पसल, व्यवसाय स्वतस्फूर्त रुपमा बन्द गरिएको हो। अहिले तानसेन बजार बन्द छ। त्यस्तै शोक मनाउन आज पाल्पा जिल्लाका सबै सहकारी कार्यालयहरु पनि बन्द रहेका छन्।
सहकारी अध्ययन भ्रमणका लागि तानसेनबाट पूर्वी पाल्पाको रामपुर जाँदै गरेको लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारीसहित अन्य अतिथि चढेको बस शुक्रबार बिहान दुर्घटनामा परेको थियो।
दुर्घटनामा ११ जनाको घटनास्थलमै र ३ जनाको उपचारका क्रममा अस्पताललमा मृत्यु भएको थियो। बस दुर्घटनामा बजारभित्रका मानिसहरु परेकाले पाल्पा सदरमुकाम तानसेन शोकमग्न छ।